Uthuli ekumisweni: kuyini, imiphumela kanye nokuvimbela ▷➡️ Postposmo | I-postposm
Uthuli olumisiwe: ukuthi luyini, imiphumela kanye nokuvimbela
U-Iris Gamen | 21/06/2022 17:00 | Imvelo
Imithelela uthuli olumisiwe lungaveza empilweni yethu incike kubukhulu bezinhlayiya kanye nemvelo yazo. Uthuli olumisiwe luqondwa njengeqoqo lezinhlayiya eziqinile ezinosayizi abahlukene ezitholakala endaweni ezungezile. Ukuchayeka kulokhu noma olunye uhlobo lothuli kungaba yingozi enkulu empilweni yethu.
Kukhona ingozi enkulu, uma izinhlayiya zincane kakhulu, ngoba zingadonswa futhi zihlale zinamathele emgudwini wokuphefumula, zingakwazi ukuxoshwa. Kulolu shicilelo okulo namuhla, sizokhuluma ngothuli lokumiswa. Sizocacisa ukungabaza ngokuthi luyini lolu hlobo lothuli, ukuthi lwakhiwa kanjani kanye nemiphumela engaba khona esingabhekana nayo.
Kulo nyaka ka-2022, emagumbini amaningi eSpain bathole isibhakabhaka esibomvu, esinemikhondo yothuli emigwaqweni nasezimotweni, ezihlatshwa umxhwele ngokuphelele. Abaningi kwakungabantu, ababengakaze basibone lesi sigcawu esibhubhisayo ngaphambili. Lolu thuli olumisiwe luyisimo sezulu esenza ukubonakala kube nzima ngenxa yokuminyana kwaso.
1 Kuyini uthuli olumisiwe?
2 Uthuli olumisiwe luvelaphi?
3 Imithelela empilweni yabantu
4 Imiphumela yothuli endaweni ezungezile
5 Kufanele sizivikele kanjani othulini olulengayo?
Kuyini uthuli olumisiwe?
Eminyakeni yamuva, ochwepheshe emkhakheni wezemvelo nesimo sezulu bakubonile ukubaluleka komthelela wothuli ekumisweni endaweni, impilo yabantu, umnotho futhi ngaphezu kwakho konke imvelo.
Uthuli olumisiwe luqondwa ngokuthi a iqoqo lezinhlayiya eziqinile ezihlakazekile endaweni yonke. Kuye ngohlobo lwezinhlayiya, imiphumela ehlukene empilweni yomuntu ingakhiqizwa. kanye nezinga lesifo. Yakhiwe ngobumba, i-gypsum, i-calcite, i-silica, namanye amaminerali. Izinhlayiya ezincane zesikhunta, impova, amagciwane, njll. nazo zingatholakala.
Le mijikelezo yothuli, ziyinkinga yesimo sezulu evame ukwenzeka ezindaweni ezomile noma ezomile. Zibangelwa iziphepho, izivunguvungu noma ukuvunguza komoya okunamandla. Le mimoya enamandla ikhahlela inqwaba yesihlabathi nothuli futhi ihamba isuka phansi iye emakhulwini noma izinkulungwane zamakhilomitha emoyeni.
Kumele kuqashelwe ukuthi ubukhulu bezinhlayiyana ezihanjiswa emoyeni, ngenxa yobukhulu bayo, ukuminyana noma ukuba khona kwamanzi, amandla amakhulu adonsela phansi.
Izimila, inendima ebaluleke kakhulu lapho kwenzeka lo mphumela wesimo sezulu. Futhi yilokho, isebenza njengongqimba oluvikelayo ongqimbeni lomhlaba ukugwema umphumela wokuguguleka komoya. Esinye isici esinomthelela ekubukeni kwalolu thuli ekumisweni isomiso, ngaphezu kwezinqubo ezithile zezolimo, ukuphathwa kabi kwamanzi, njll.
Uthuli olumisiwe luvelaphi?
Izindawo eziyinhloko lapho lolu thuli olumisiwe esikhuluma ngalo lugxile khona izindawo ezomile zezwekazi lase-Afrika, e-Asia Ephakathi kanye neNhlonhlo yase-Arabia.
Uthuli olumisiwe oluvela e-Afrika aluqukethe izinhlayiya zamaminerali kuphela, kodwa ngezikhathi ezithile kuye kwatholakala izakhi ezingcolisayo ezihudulwayo futhi ziqoqwe ezindaweni ezithile. Izinhlayiya ze-cesium 137, i-isotope enemisebe, zitholakele.
Ukuhlasela kwalolu hlobo lothuli kwenzeka lapho umoya ususa uthuli oluningi lusuka ogwadule lwaseSahara uluyise eCanary Islands noma eNhlonhlweni, njengoba sibonile ekuqaleni kwalo nyaka. Lokhu Kudala ukuthi isibhakabhaka nomoya kube namafu, ukubonakala kunciphe futhi kuba nzima kakhulu ukuphefumula umoya oshiwoyo.
Bakhona ababiza lo mphumela wobungu, kodwa kumele kugcizelelwe ukuthi igama elilodwa alifani nelinye.. I-Haze iwumphumela womkhathi obangela ukuthukuthela komoya futhi ngokuvamile ubangelwa ukuhwamuka kwamanzi, okungukuthi, umhwamuko wamanzi uyimbangela eyinhloko yalokhu kubonakala okuphansi endaweni ezungezile. Ngakolunye uhlangothi, uthuli ekumisweni, njengoba sesibonile, ukutholakala kwezinhlayiya ezincane emoyeni wemvelaphi yaseSahara.
Omunye umehluko okufanele uphawule ukuthi phakathi kweziphepho zesihlabathi nothuli olumisiwe.. Umehluko omkhulu phakathi kwalokhu okubili ubukhulu bezinhlayiya. Endabeni yezivunguvungu zothuli, izinhlayiya zincane futhi zilula kangangokuthi zingakhuphuka zifinyelele ukuphakama okukhulu futhi zenze inqwaba yomoya oshisayo ohamba amakhulu noma izinkulungwane zamakhilomitha ngosizo lomoya.
Imithelela empilweni yabantu
Izinhlayiya zothuli ezimisiwe emoyeni ziyingozi empilweni yabantu. Kuye ngobukhulu balezi zinhlayiya, ingozi ezibeka kithi inqunywa lolu hlobo lomphumela.
Isivunguvungu sothuli esivela ezwenikazi lase-Afrika esithinte inhlonhlo kulo nyaka sidale uthuli oluningi kakhulu olwake lwabonakala. Ukuba khona kwalolu thuli emoyeni akukwazi nje ukudala izinkinga zokuphefumula noma zamehlo, kodwa futhi nenhliziyo.
Izinhlayiya ezidonswa umoya, ngokuvamile zihlala zivaleleke emizimbeni yethu, emakhaleni, emlonyeni noma emgudwini wokuphefumula, okwenza kube nezinkinga zokuphefumula njengesifuba somoya, i-rhinitis, inyumoniya, njll. Ngokuqondene nezinhlayiya ezingcono, zingangena emzimbeni wethu ezithinta umgudu wokuphefumula ophansi, ukugeleza kwegazi futhi zithinte nezitho ezithile zangaphakathi.
Ukuchayeka kulolu hlobo lwezinhlayiya ngaphandle kokuthatha isinyathelo kungabangela amakhulu okufa ngenxa yezifo zenhliziyo. phakathi kwabantu abasha nabadala. Ochwepheshe abaningi baveza ukuthi ukuhogela kwalezi zinhlayiya zothuli ezimisiwe esimweni sezulu esomile kulimaza ulwelwesi lwamafinyila ekhala nomphimbo, okwenza kube lula kakhulu ukuba kubonakale isifo.
Imiphumela yothuli endaweni ezungezile
Kukhona abakholelwa ukuthi uthuli oluvela ogwadule lwaseSahara luqukethe imisoco yemvelo nemvelo yasolwandle. Nokho, futhi Inemiphumela emibi emikhakheni efana nezolimo noma imfuyo. Lezi, ukukhiqizwa kwazo kuyancipha ngenxa yokulahlekelwa izitshalo zabo, ukuncipha komsebenzi kanye nokuguguleka okukhulu komhlabathi.
Eminye imiphumela engasizi ukuthuthukiswa kwemisebenzi ethile yile ukuvaleka kwamashaneli okunisela, ukunqwabelana kothuli emizileni emikhulu yokuthutha, ukwehla kwezinga lamanzi kokubili emifuleni, emiseleni noma emifudlaneni, kanye neminye imiphumela eminingi.
La izinga lomoya eliphansi kanye nokungaboni kahle nakho kunomthelela ekwenzeni izinto zokuhamba ngolwandle, umhlaba noma emoyeni zibe nzima kakhulu. Ukukwazi ukucabangela, ingozi enkulu ekusebenzeni kwezokuthutha kwabantu noma impahla. Futhi, gcizelela ukuthi izinhlayiya ezitholakala emoyeni zingaba yingozi ezinjinini zezindlela ezithile zokuthutha njengezindiza.
Izitshalo zamandla elanga yizona ezithinteka kakhulu kulo mphumela wesimo sezulu. Kusukela, ukukhiqizwa kwamandla elanga kuyancishiswa ngenxa yokuthi imisebe yelanga ayitholakali. Amaphaneli awasebenzi ngenxa yokunqwabelana kothuli kanye nezinga lomoya eliphansi, ngakho kufanele agcinwe engenalo uthuli ngangokunokwenzeka ukuze agweme ukuvinjelwa kwemisebe.
Kufanele sizivikele kanjani othulini olulengayo?
Ngokuhamba kwesikhathi, Umphakathi uya ngokuya uziqaphela izinkinga ezibangelwa ukukhishelwa kwamagesi angcolisayo emkhathini.. Ngaphezu kwalokho, ukuthi lezi zithonya kanjani ukwanda kokungcola kanye nemiphumela emibi elandelayo empilweni yethu.
Ukungcoliswa komoya kuchazwa njengengxube yezinto ezihlukene nezinto eziyingozi empilweni yethu.. Ezinye zingase zivele emithonjeni yemvelo, njengothuli olumisiwe, njengoba sibonile engxenyeni edlule. Kodwa abanye bavela ngokuqondile emisebenzini emibi yomuntu.
Ukubhekana nalezi zinhlobo zemiphumela, uchungechunge lwezincomo kufanele lulandelwe. Uthuli olumisiwe aluyona into entsha, ngoba lungabonakala njalo ezindaweni ezithile zensimu yaseSpain. Akuthinti nje ukubonakala, kodwa kufanele sengeze umthelela omubi empilweni kanye nemvelo. Olandelayo, Sikushiyela amathiphu wokuthi yini okufanele uyilandele ezinsukwini lapho uthuli lugcwele emoyeni.
Lapho kunothuli oluningi emoyeni, Kutuswa ukugwema ukuphuma ngaphandle futhi ugcine iminyango namafasitela evaliwe.
La hydration njalo Lesi esinye iseluleko esibaluleke kakhulu lapho sibhekene nalesi simo.
Uma kufanele uphumele emsebenzini, wezokwelapha noma ezinye izizathu, kufanele ukwenze ngenkathi uzivikela. Ukusebenzisa imaski ye-FFP2, ukugwema ukuhogela izinhlayiya.
Ukusetshenziswa kwezifihla-buso kungasisiza ukuthi sinciphise ukuchayeka ezintweni ezingcolisayo. Hhayi nje noma iyiphi njengoba sesike sasho ephuzwini eledlule, kumele kube yi-FFP2.
Ukuze uqedele, khumbula ukuthi uthuli ekumisweni lungathwala noma iyiphi izinhlayiyana, kungaba ukungcola noma ama-microorganisms. Lokhu kungaba yingozi ohlelweni lwendalo noma empilweni yethu. Khumbula ukuthi abantu abasengozini enkulu kufanele bakhawulele ukuchayeka kulolu hlobo lwento uma kukhona ukugcwala okuphezulu kwezinhlayiya emoyeni. Uma uqala ukuzwa ukuphelelwa umoya, ukuphefumula kanzima, ukukhwehlela okukhulu nanoma yiziphi ezinye izimpawu, ungangabazi ukuya esikhungweni sezokwelapha ukuze uhlole impilo yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: I-postposm » Imvelo » Uthuli olumisiwe: ukuthi luyini, imiphumela kanye nokuvimbela
indlela omiswe izimbali